Deg Deg:- Fanaanadii caanka aheyd ee Qaali Ladan oo fanka isaga baxday. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Deg Deg:- Fanaanadii caanka aheyd ee Qaali Ladan oo fanka isaga baxday.
Deg Deg:- Fanaanadii caanka aheyd ee Qaali Ladan oo fanka isaga baxday.
Iyadoo dhawaan ay soo badanayeen fanaaniinta isaga baxeysa fanka Soomaaliyeed ayaa manta waxaa fananiintaasi ku soo biirtay fanaanada da`da yar Qaali Ladan.
Iyadoo ka hadleysay facebook live oo ay soo gashay maanta ayay ku xaqiijisay fanaanadii codka macaaneyd ee Qaali Ladan in ay gabi ahaanka joojisay fankii ay ku soo jirtay mudada, kaas oo ay ka bilowday magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Waxa ay sheegtay in arintaani ay tahay goàan iyada ka yimid sidaasi darteedna ay bulshada Soomaaliyeed ka codsaneyso in ay gabi ahaanba joohiyaan dhageysiga iyo daawashada heesihii ay qaaday mudadii ay fanka ku jirtay.
Waxa ay sheegtay in haatan wixii ka dambeeya ay ka dheeraaneyso goobaha fanka iyo xafladaha lagu qabto iyadoo dhanka kalana sheegtay in asxaabtii ay ku laheyd fanka haatan wixii ka dambeeya ay ku kulmi doonaan goobaha caadiga ah.
Fanaanadaan ayaa dhawaan la aqal gashay filimsameeye Kaafi Abdi iyadoo baraha bulshadana ku soo bandhigtay in dhawaan ay hooyo noqon doonto insha Allaah.
Horay fanka waxaa uga baxay fanaaniin badan oo ay ka mid ahaayeen Abdi-Hani Hashi, Habdi Queen, Mohamed Abdi BK iyo kuwa kale oo badan.
Previous articleMidowga Yurub oo qorsheynaya in ay warqado cadeymo ah u sameeyaan dadka laga talaalo Karoona Feyrus.
Next articleGabar 12 jir Soomaali ah oo Schoolkeeda looga buriyay in ay ku adagtahay diinteeda.